फेरी लकडाउन ! शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुका साथै मुख्य नाकामा सुरक्षा जाँचमा कडाइ – Khabar Patrika Np
फेरी लकडाउन ! शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुका साथै मुख्य नाकामा सुरक्षा जाँचमा कडाइ
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २४, २०७७ समय: २२:३९:०५
जुम्लामा विहिवार देखि जिल्लाभर शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुका साथै जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सुरक्षा जाँचमा कडाइ गरिने भएको छ । बुधवार बसेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरको छ । जिल्ला बाहिरबाट प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै अन्तरपालिका आवतजावतमा समेत कडाइ गरिने भएको छ ।
लामो समयको बन्दाबन्दीपछि कात्तिक दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालनमा आएका जिल्लाभरका शैक्षिक संस्था पुनः बन्द हुने निर्णयले विद्यार्थीलाई समस्या बनाउने भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ४ गतेदेखि जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा रहेका सबै शैक्षिक संस्थामा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि पठनपाठन बन्द गरिने भएको छ ।
४१० पटक हेरिएको